Ciidanka TPLF oo gantaallo ku garaacday Garoonka Diyaaradaha & Wasaaradda Warfaafinta Eriteriya | SMC
Home WARARKA MAANTA Ciidanka TPLF oo gantaallo ku garaacday Garoonka Diyaaradaha & Wasaaradda Warfaafinta Eriteriya
Ciidanka TPLF oo gantaallo ku garaacday Garoonka Diyaaradaha & Wasaaradda Warfaafinta Eriteriya
Is-maamulka Gobolka Tigreega dalka Itoobiya ayaa ku hanjabay inuu weerar ku qaadayo dalka Ertirea oo uu ku eedeeyay inu qeyb ka yahay dagaalka dowladda Federaalka ku heyso Gobolkaasi.
Digniintan ayaa kasoo baxday Madaxda Gobolka Tigray oo si cad u sheegay in Eritrea ay ciidamadeeda soo gelisay Gobolka Tigree ayna qeyb ka tahay dagaalka Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ku qaaday Gobolkaasi.
Dowladda Eritrea ayaa hore u beenisay inay ku lug leedahay dagaalka ka socda Gobolka Tigray, laakiin waxaa si weyn loo tuhunsan yahay in Madaxweyynaha Eritrea uu geed fadhi u yahay dagaalka ka socda Tigray.
Getachew Reda oo ka mida madaxda sare ee Jabhadda TPLF ayaa sheegay inay beegsan doonaan Eritrea, isla markaana aysan ka labalabeyn doonin inay duqeeyaan gudaha Eritrea oo ay ku jirto caasimadda dalkaasi ee Asmara.
“Meel kastoo ay naga soo weerarraan ha noqoto Asmara ama Bahirdar.. tallaabo ayaan ka qaadi doonna, waanan ka jawaabi doonnaa… Waxaan Gantaallo ku weerarri doonaa bar-tilmaameedyo gaara iyo garoomada diyaaradaha..” ayuu yiri Getachew
Wuxuu intaas ku daray inay weerarro Gantaallo ah la beegsan doonaan si ay u fashiliyaan ciidamada laga soo daad gureynayo magaalada Massawa iyo Asmara.
Previous article(Xog) Dhismaha Guryo uu leeyahay MW Farmaajo oo ku yaal Nairobi oo gabo-gabo maraya
Next articleXasan Kheyre & Farmaajo oo qadka taleefanka kuwada hadlay, Maxay kawada hadleen?